Guddoomiyaha gobolka Mudug oo sheegay inay garanayaan dadkii fuliyey qaar ka mid dilalkii Galkacyo. – Radio Daljir
Galkacyo, Oct, 31 – Guddoomiyaha gobolka mudug Maxamed Yuusuf Tigey ayaa sheegay in la aqoonsaday ciddii ka dambeysey mid ka mid ah dilalkii xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Maxamed Yuusuf ?Tigay? ayaa waraysi gaar ah oo maantay siiyay Radio Daljir waxaa uu ku sheegay in C/nuur Guuleed Xirsi oo xalay Gaalkacyo lagu dilay arrintiisu ay ahayd shir qool qorshaysan, islamarkaasna kooxdii dilka u gaysatey ay u baxsadeen xaafada Wadajir Gaalkacyo ee uu ka arrimiyo maamulka Galmudug.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Tigay ayaa sheegay in ay ka soo qaybgaleen aaskii Allaha u naxariistee marxuum C/nuur odayaal ka socda beesha raggii dilka gaystey, waxaana odoyaashu ballan qaadeen in raggaasi ay soo galin doonaan gacanta laamaha ammaanka gobolka Mudug.
Dhinaca kale, Maxamed Yuusuf Tigay ayaa sheegay in aan wali la hayn ciddii ka dambaysey dilkii xalay isla Gaalkacyo loogu gaystay Allaha u naxariistee C/qaadir Xaaji Jaamac oo ahaa cilmi-baare u shaqaynayey hay?dda Puntland u qaabilsan cilmi-baarista iyo hormarinta ee PDRC.
Gudoomiyaha gobolka mudug Maxamed Yuusuf Tigey ayaa ugu dambayntii rajo wacan ka muujiyay arrimaha nabad-galyo ee gobolka Mudug, waxaana uu shacabka gobolka Mudug ugu baaqay inay laamaha ammaanka si qeexan ugala shaqeeyaan sigida guud ahaanba ammaanka gobolka Mudug.